Wednesday January 16, 2019 - 17:41:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo ka dhacay duleedka deegaanno katirsan Sh/Hoose.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa xalay weeraro saf ballaaran ku miray cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee ku sugan deegaanno katirsan wilaayada Sh/Hoose iyo duleedka Muqdisho.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Dayniile ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay weerar kusoo Afjareen saldhig melleteri oo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay uga sugnaayeen deegaanka Ceelshaalle.
Sidoo kale Xoogaga Al Shabaab ayaa cagta mariyay saldhig ay maleeshiyaad cadowga ah uga sugnaayeen dhowr xaafadood oo katirsan degmada Afgooye oo 30Km dhanka galbeed uga beegan Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in xoogaga Al Shabaab ay xalay maleeshiyaadka dowladda ku baacsadeen xaafado ay kamid yihiin Buula Fooliyo,Baalguri, iyo Mukeyga sidoo kale xoogaga Jigaadiga Al Shabaab waxay weerar ku beegsadeen saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Afgooye.
Saraakiisha katirsan ciidamada Al Shabaab ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 21 askari oo katirsan Dowladda Federaalka lagu dilay weeraradii xalay ka dhacay duleedka muqdisho iyo degmada Afgooye waxaana kamid ahaa sarkaal sare.
illaa 9 saldhgig oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dabadhilifyada Soomaalida ayaa weeraro lagu qaaday saldhigyada qaarna waa lasoo afjaray, sidoo kale weeraro qorshaysan ayay ciidamada wilaayada Islaamiga Sh/hoose ku qaadeen saldhigyada ciidamada AMISOM ee deegaannada calamada iyo ceelasha Arbacoow ee duleedka Muqdisho.
Dhinaca Maanta barqadii gaari nuuca caafimaadka ambalaas ah oo isku dayaye in uu ciidamada dhaawacmay kasoo daad gureeyo deegaanka ceelshaalle ayaa qarax lagula eegtay degmada dayniile, ilo wareedyo ayaa sheegaya in gaarigu uu gabi ahaantiisba burburay.
Xerada duleedka Dayniille dhacda waxaa lagu magacaabaa Ceel-Shaalle halkaas oo gabi ahaanba ay la wareegeen ciidamada Al Shabaab waxaana dadkii lagu dilay kamid ahaa sarkaal taliye Horin ahaa oo magaciisa lagu soo koobay Cali Dheere.
Idaacadda Andalus ee Afka Al Shabaab ku hadasha ayaa baahisay in weeraradii xalay dhacay lagu dilay ugu yaraan 21 askari halka dhaawacyada ciidamada dowladda ay gaarayaan 28 askari.